IMabala 'izingela' inkosi ye-Kwaito | News24
Durban - Umnikazi wenkampani yodumo iMabala Nois Entertainment, uReggie Governor Nkabinde, kubikwa ukuthi uzama ukunxenxa inkakha emculweni ukuba isebenzisane nenkampani yakhe ngenhloso yokuyivusa.
IMabala Noise imangaze abaningi eminyakeni emibalwa eyedlule isayinisa osaziwayo abahlukene okubalwa abaculi, abalingisi, oDJ nabethuli bezinhlelo zikamabonakude.
Le nkampani ithathwe njengenkulu eNingizimu Afrika ngokusayinisa osaziwayo abanohlonze futhi asebezakhele igama kulo mkhakha.
OLUNYE UDABA:IMabala Noise izomemezela ukudedelwa kwabaculi abayisikhombisa
Muva nje kubukeka le nkampani ifadalala njengoba isishiywe yinqwaba yalabo saziwayo kanye nezikhulu zayo.
ILANGA LangeSonto emasontweni ambalwa adlule libikile ngokushiya kwezikhulu zale nkampani nokuthi kubukeka izinto zimapeketwane kuyona.
Ngokuthola kwaleli phephandaba ngomunye umthombo osondelene nezindaba zaseMabala, uNkabinde kuthiwa usezingxoxweni nenkakha yomculi, u-Arthur Mafokate, naye onenkampani yakhe enabaculi i-999 Music ukuthi azozama ukuvusa le nkampani okubikwa ukuthi isinedlanzana lamaciko.
Umthombo uthi uNkabinde obuye abe nguMgcinimafa we-African National Congress Youth League (ANCYL) useke waba nemihlangano noMafokate ngenhloso yokuba abeyingxenye yale nkampani.
"Inkinga wukuthi u-Arthur akasithathi isinqumo ngesicelo sikaNkabinde njengoba emanqika ukujoyina le nkampani kwazise usafuna ukuqonda isizathu sokushiya kwabantu isigubhukane kule nkampani," kuchaza umthombo.
Thola udaba oluphelele kqiphephandaba iLANGA LangeSonto.
Kalk Bay 07:58 AM